ग्यास्ट्रिकदेखि कोलेस्ट्रोल सम्मको औषधि बिरे नुन – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/ग्यास्ट्रिकदेखि कोलेस्ट्रोल सम्मको औषधि बिरे नुन
ग्यास्ट्रिकदेखि कोलेस्ट्रोल सम्मको औषधि बिरे नुन
ग्यास्ट्रिक पीडित नेपालीको संख्या धेरै छ । ग्यास्ट्रिकले तपाईं पनि हैरान हुनुहुन्छ भने यसको समाधानका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनु भएको होला । ग्यास्ट्रिकका लागि बिरेनुनले फाइदा पुग्छ । ग्यास्ट्रिकलाई मात्र होयन बिरे नुनले धेरै खालका समस्या समाधान हुन्छ । बिरेनुनको प्रयोगले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अम्लीयलगायतका समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कति धन कमाउछन् ? तपाईको जन्म महिना अनुसार कस्तो छ भाग्य ? हेर्नुहोस
मेरो गुलाफ अस्विकार भयो प्रेम दिवसमा
यसरी चीन्नुहोस बिषादी हालेको तरकारी(अनिवार्य सेयर गरी सबैमा चेतना फैलाउँ)